HAZAKAZA-PIARAKODIA – SLALOM :: Tompondakan’i Madagasikara i Tsiory, laharana faharoa i Mika • AoRaha
HAZAKAZA-PIARAKODIA – SLALOM Tompondakan’i Madagasikara i Tsiory, laharana faharoa i Mika
Raha efa fantatra, talohan’ ny dingana farany ho an’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara izay nisalotra ny anaram-boninahitra teo amin’ny hazakaza-piarakodia sokajy Slalom, dia nosoniavin’i Mika Rasoamaromaka, ny faran’ny herinandro lasa teo ny maha tompondaka lefitra azy.
Nitana ny laharana faharoa, tamin’ny dingana farany na ny “Last Race”, ny faran’ny herinandro lasa teo i Tsiory Rakotomiarana (Peugeot 106) ary nahavita ny anjara hazakazany tamin’ ny fe-potoana 2 minitra 50’’96. Nitana ny laharana faharoa kosa i Mika Rasoamaromaka, izay nanamory Citroën C2, tamin’ ny fe-potoana 2 minitra 52’’02. Tany amin’ny laharana fahatelo kosa no nisy an’
i Fred Rabekoto, izay nitondra Peugeot 206 rehefa nahavita ny hazakazaka tamin’ny fe-potoana 2 minitra 52’’82.
Tamin’ny filaharana ankapobeny dia manana isa 154 i Tsiory ka nahavoahosotra azy ho tompondaka, nanomboka teo amin’ny dingana fahefatra. Efa taty amin’ny dingana fahenina kosa vao nazava ny nahalefitry ny tompondaka an’i Mika, manana isa 101 tamin’ny fiafaran’ny fifaninanam-pirenena. Nikatona hatreo ny fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara tamin’ity taom-pihazakazahana ity.
Fahamaizan’ny eglizy tany Paris Miara-miombona alahelo tamin’ny voina ireo Eveka malagasy
Ady amin’ny kolikoly Mila fandaminana ireo sehatra isan-tsokajiny
AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA :: Manome toky ny hisian’ny vary mora amidy mandavan-taona Rajoelina
Tranga mampalahelo Mitantara ny zava-niseho rehetra ny rain’ilay vavitokana maty nokendaina